Yakachipa Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Vertical Fertilizer Mixer Machine?
Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine chinhu chakakosha zvekusanganisa michina mukugadzira fotereza. Inosanganisira yekusanganisa humburumbira, furemu, mota, chinodzora, ruoko rinotenderera, inomutsa foshoro, kuchenesa chinotsvaira, nezvimwewo, mota uye nzira yekufambisa yakaiswa pasi pechirinda. Muchina uyu unotora cycloid tsono yokuderedza kutyaira zvakananga, izvo zvinoita chengetedzo kugadzirwa.
Chii chinonzi The Vertical Fertilizer Mixer Machine inoshandiswa?
Yedu Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine seyakakosha michina yekusanganisa mufetiraiza yekugadzira mutsara. Inogadzirisa dambudziko rekuti huwandu hwemvura yakawedzerwa mukuvhengana kunonetsa kudzora, uye zvakare inogadzirisa dambudziko iro zvinhu zvacho zviri nyore kutevedzera uye kusangana nekuda kwesimba diki rinomutsa remusanganiswa we fetiraiza.
Kushanda kweVertical Fertilizer Chisanganiso Machine
Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine ichavhenganisa akasiyana mbishi zvigadzirwa kuti vabudirire chinangwa cheyunifomu yakazara kusanganisa.
Zvakanakira Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine
(1) Nekuti iyo yemuchinjikwa-akabatana gungano rakabatana pakati inokanganisa foshoro nerinotenderedza ruoko, uye yekudhonza tsvimbo kana sikuruwa zvakarongedzwa kudzora yekushanda gwanza rinomutsa foshoro, chinoshamisa chekuoma kwezvinhu zvakaomarara zvinogona kuve zvakanyanya kubviswa kudzikisa kushanda kuramba uye kusakara.
(2) Iko kukona pakati penzvimbo yekushandira yefoshoro inokamhira uye yekumberi nzira munzira dzese dzakamira uye dzakatwasuka haina kujeka, iyo inogona kusimudzira inomutsa mhedzisiro nekuvandudza mhando yekusanganisa.
(3) Chiteshi chekuburitsa chiri pamadziro erutivi rwebhari. Iyo dhiramu inogona kusvetuka ichipindirana zvine chekuita nerack, uye chinokwenenzverwa chinogona kumisikidzwa kuti ikurumidze kuburitsa uye zvakanyanya kunyatso.
(4) Zviri nyore uye zviri nyore kuchengetedza.
Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine Vhidhiyo Ratidza
Vertical Fertilizer Chisanganiso Machine Model Sarudzo
Inokurudzira shaft kumhanya
Simudza kumhanya kwe hopper
Simba rekumutsa mota
mprove simba remota
Kunonyanyisa PARTICIPLE saizi uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa
Rakaumbwa saizi （HxWxH）
Yese unit uremu
Pashure: BB Fertilizer Musanganiswa
Zvadaro: Rotary Imwe Cylinder Kuomesa Muchina muFertilizer Kugadziriswa
Nhanganyaya Chii chinonzi Fertilizer Pellets inotonhora Muchina? Iyo Fertilizer Pellets inotonhodza muchina yakagadzirirwa kudzikisira kusvibiswa kwemhepo inotonhora uye kugadzirisa nharaunda inoshanda. Iko kushandiswa kwedhiramu inotonhorera muchina kupfupisa iyo yekugadzira manyowa maitiro. Kufananidza pamwe nokuomesa muchina kunogona zvikuru kuvandudza Co ...